Kpido: otu esi akwalite webinar | Martech Zone
Kpido: otu esi akwalite webinar
Na 2013, 62% nke B2B jiri webinars iji kwalite ụdị ha, nke sitere na 42% afọ gara aga. O doro anya, webinars na-enweta ewu ewu na ha na-arụ ọrụ dị ka onye na-eduga ọgbọ ngwá ọrụ, ọ bụghị naanị ahịa ngwá ọrụ. Kedu ihe kpatara ị ga - eji tinye ha na atụmatụ azụmaahịa gị na mmefu ego gị? N'ihi na webinars nọ n'ọkwá dị ka usoro kachasị dị elu na-eduga ndị nduzi ruru eru. N'oge na-adịbeghị anya, mụ na ndị ahịa na-arụ ọrụ na webinar ngwọta, ReadyTalk, na ụfọdụ ọdịnaya maka webinar kacha mma